WordPress Kuchinja kuita CMS Powerhouse | Martech Zone
Chipiri, July 15, 2008 Muvhuro, September 30, 2013 Douglas Karr
WordPress iri kunyatso shanduka yapfuura blog application uye ichienda mune zvimwe zvinoshamisa zvinhu izvo zvinopeperesa zvakajairika CMS. Ndiri kushamiswa chaizvo nekukurumidza kuri kuita kukwidziridzwa kweWordPress pamwe nehunyanzvi maficha ari kuwedzerwa.
Zvino kana ivo vaigona kungoenderana nezvinodiwa
Ichi ndicho skrini chandakasiiwa nacho pandakayedza kurodha pasi WordPress 2.6 mangwanani ano. Zvakanaka, hazvo… ndinomirira.
Tags: WordPresswordpress 2.6Wordpress kusimudzira
Zorora murunyararo, Shamwari yangu Mike
Jul 15, 2008 pa 8: 32 AM
Izvo zvinogona kunge zvichikonzerwa nenhamba hombe yekutora panguva.
Ini ndanga ndatokwidziridza yangu hazvo 😉
Jul 15, 2008 pa 10: 32 AM
Jul 15, 2008 pa 9: 29 AM
Ndinoda kunzwa nhau dzakadai. Ini ndinoshandisa WordPress semhinduro yeCMS kune vakawanda vatengi vangu.
Jul 16, 2008 pa 1: 36 AM
Hi Douglas!, Ndinonyatsoda blog yako; kunyangwe ini ndisiri chaizvo pane imwechete bhizinesi nzvimbo, ini ndoda kuverenga kuburikidza nezvinoitika zvemumwe munhu ari, uye ndinonakidzwa neruzivo rwakawanda. Ok, izvozvi zvakakwana zvekurumbidza :), nhasi ndadzvanya pamusoro weRSS musoro weichi posvo kuti usvike pano ndikawana kukanganisa, uye haisi nguva yekutanga kuitika. Icho chinongedzo chiri muRSS chinotumira kune feedburner uyezve ku "wordpress-26-iri-pano", nepo chinongedzo chakakodzera chiri "wordpress-ichichinja-kuva-a-cms-simba imba". Handizive kana chiri chimwe chinhu kubva mukumisikidzwa iwe chaunogona kushandura.